Ama-Neurotransmitter Inkcazo kunye noLuhlu
Ama-neurotransmitters ayenemichiza ewela i-synapses ukuhambisa iimpembelelo ukusuka kwi -neuron ukuya kwelinye i-neuron, iselflegi okanye i-cell cell. Ngamanye amazwi, i-neurotransmitters isetyenziselwa ukuthumela iimpawu ukusuka kwenye inxalenye yomzimba kwenye. Kuye kwaziwa ama-neurotransmitter angama-100. Zininzi zakhiwa kwi-amino acids. Ezinye ziyi-molecule ezinzima.
Ama-neurotransmitter enza imisebenzi emininzi ebalulekileyo emzimbeni.
Ngokomzekelo, zilawula intliziyo, xela imiphunga xa uphefumula, misela isilinganisi sokubeka ubunzima, uvuselele ukoma, uphazamise imizwelo, kwaye ulawule ukugaya.
I-synaptic cleft yafunyanwa ngumdlali wezilwanyana waseSpain uSantiago Ramón y Cajal ekuqaleni kwekhulu lama-20. Ngomnyaka we-1921, isazi sempilo yezilwanyana zaseJamani u-Otto Loewi saqinisekisa ukuba unxibelelwano phakathi kwe-neurons lwalubangelwa yimichiza ekhutshiwe. ULoewi ufumene i-neurotransmitter yokuqala eyaziwayo, i-acetylcholine.
Indlela abaSebenzi be-Neurotransmitters Work
I-terminal ye-axon ye-synapse i-neurotransmitters kwivenicles. Xa kukhuthazwa yinto enokwenzeka, i-synaptic vesicles ye-synapse release neurotransmitters, ewela umgama omncinane (i-synaptic cleft) phakathi kwesiphelo se-axon kunye ne-dendrite nge-dissemination . Xa i-neurotransmitter ibopha i-receptor kwi-dendrite, uphawu luyaziswa. I-neurotransmitter ihlala kwi-synaptic cleft ngexesha elifutshane.
Emva koko ibuyiselwa kwi-neuron ye-presynaptic ngokusebenzisa inkqubo yokubuyiswa kwakhona, i-metabolized by enzymes, okanye iboshwe kwi-receptor.
Xa i-neurotransmitter ibophelela kwi-neuron ye-postsynaptic, inokuyifumana okanye iyayivimbela. I-Neurons ihlala ixhunyaniswe kwezinye i-neurons, ngoko nayiphi na ixesha elinikeziweyo i-neuron ingaxhomekeke kwi-neurotransmitter ezininzi.
Ukuba ivuselelo lokukhushulwa likhulu kunefuthe lokuvimbela, i-neuron "iya kutshisa" kwaye yenze isenzo esinokuthi sikhiphe ama-neurotransmitter kwenye i-neuron. Ngaloo ndlela, umqondiso uqhutyelwa kwelinye iseli ukuya kwesinye.
Enye indlela yokuhlukanisa i-neurotransmitters isekelwe kwimizimba yazo. Izigaba ziquka:
Amino acid: γ-aminobutyric acid (GABA), i-aspartate, glutamate, glycine, uD-serine
Iigesi: i-carbon monoxide (CO), i-hydrogen sulfide (H 2 S), i-nitric oxide (AWO)
I-Monoamines: i-dopamine, i-epinephrine, i-histamine, i-norepinephrin, i-serotonin
Iipeptides: i-β-endorphin, i-amphetamines, i-somatostatin, i-enkephalin
Iipilisi: i-adenosine, i- adenosine triphosphate (ATP)
Ukulandelela amines: i-octopine, i-phenethylamine, i-trypramine
Ezinye i-molecule: i-acetylcholine, i-anandamide
Ion iilula: zinc
Enye indlela ebalulekileyo yokuhlukanisa i-neurotransmitter ingqinelana nokuba ingaba yintlonelo okanye iyinqobo . Nangona kunjalo, ingaba i-neurotransmitter ikhutshwe okanye inhibitory incike kwi-receptor yayo. Ngokomzekelo, i-acetylcholine inqabile entliziyweni (iyancipha intliziyo yenqanaba), kodwa i-excitatory to muscle muscle (ibangela ukuba inkontileka).
I-Glutamate iyona nto ininzi kakhulu ye-neurotransmitter kubantu, isetyenziswe malunga nesiqingatha se-neurons engqondweni yengqondo . Ingummiselo wokuqala we-excitatory kwi-system ye-nervous system. Enye yemisebenzi yayo kukunceda ukukhumbula iifom. Ngokuthakazelisayo, i-glutamate inetyhefu kwi-neurons. Umonakalo wobunzima okanye ukubetha kungaholela ekugqibeleni i-glutamate, i-neurons yokubulala.
I-GABA yiyona nto yokupasa inhibitory in brain brain. Kunceda ukulawula uxhalaba. Ukulahleka kwe-GABA kungabangela ukuhlutha.
I-Glycine yiyona nto inqamlekileyo ye-neurotransmitter kwi-vertebrate cord spord .
I-Acetylcholine ikhuthaza imisipha, imisebenzi kwi-system ye-nerveous autonomic neurons neurons, kwaye idibene ne-sleep sleep . Uninzi lweentshefu lenza ngokuthintela i-acetylcholine receptors. Imizekelo ibandakanya i-botulin, i-curare, kunye ne-hemlock. Isifo se-Alzheimer sidibene nokuhla kwexabiso elikhulu kumazinga ase-acetylcholine.
I-Norepinephrine (i-noradrenaline) yandisa izinga lentliziyo kunye negazi. Yingxenye yenkqubo yomzimba "yokulwa okanye indiza". I-Norepinephrine nayo iyafuneka ukudala imemori. Ukuxinezeleka kugxininisa izitolo ze-neurotransmitter.
I-Dopamine ngumthumeli ovimbelayo ohambelana nomgangatho wokuvuza wengqondo. Amanqanaba e-dopamine aphantsi adibene nokuxhalaba kwezenhlalakahle kunye nesifo se-Parkinson, ngelixa i-dopamine engaphezulu ihlobene ne-schizophrenia.
I-Serotonin yi-neurotransmitter engavimbeliyo echaphazelekayo kwimvakalelo, imizwa kunye nokuqonda. Amanqanaba e-serotonin aphantsi angakhokelela ekucindezelekeni, ukuthambekela kokuzibulala, imiba yolawulo lomsindo, ubunzima bokulala, i-migraines, kunye nokwenyuka kwama-carbohydrates. Umzimba unokwenza i-serotonin yenziwe kwi -amino acid tryptophan , efumaneka kwizinto ezifana nobisi obufudumele kunye ne-turkey.
I-Endorphins yiklasi yamamolekyu afana ne-opioids (umzekelo, i-morphine, i-heroine) ngokwemigaqo yesakhiwo kunye nomsebenzi. Igama elithi "endorphin" lifutshane "i-morphine engapheliyo." I-Endorphins yimiyalezo yokukhusela idibaniso ehambelana nokuzonwabisa kunye nentlungu. Kwezinye izilwanyana, ezi khemikhali zinciphisa i-metabolism kunye ne-permit permit.
Kuphawulekayo i-American Inventors ye-Industrial Revolution
ImiSebenzi yoKwandisa isigama soMoya
Okwesibini amathuba okwehla kwezikolo eziphezulu
Indlela yokusebenzisa iMdlalo yeBhola njenge-Icebreaker yamaqela
Kutheni Unomdla KwiKholeji Yethu?
Iingcamango Zolonwabo NgeNtlanganiso Yobusasa
Iingcebiso zokubhena iSigqibo seKhote sokuGxeka
Yintoni Eyayithanda Ukufumana I-Cupping?
Iqela le-Women's Alpine Ski Racing Team
Iintsingiselo zokuguquka ebuKristwini
Iingoma ezili-10 ezidumileyo zeKrismesi
Ngaba uMongameli Obama Wavusa Umhla Wemibuzo Yomthandazo?
Iziqulunqo kunye nezinto ezifunyenwe yiNzululwazi yamaGrike aseMandulo
I-Dinosaur Iingxabano Eziya Kuphela